यी ८ वर्षीया बालिका जसले प्रधानमन्त्री मोदीको सम्मान लत्याइन | Pennepal
Home अन्तराष्ट्रिय यी ८ वर्षीया बालिका जसले प्रधानमन्त्री मोदीको सम्मान लत्याइन
यी ८ वर्षीया बालिका जसले प्रधानमन्त्री मोदीको सम्मान लत्याइन
एजेन्सी । ‘प्रिय नरेन्द्र मोदीजी यदी तपाई मेरो आवाज सुन्नुहुन्छ भने मलाई सेलिब्रेट नगर्नु होस् । आफ्नो पहल #SheInspiresUs का मार्फत मलाई कयौं प्रेरणादायी महिलामा सामेल गर्नु भएकामा धन्यवाद । कयौ पटक सोचेर मैले यो सम्मान अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेकी हुँ , यस हिन्द !’
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्मान लत्याउने यी ८ वर्षीया बालिकाको नाम लिसिप्रिया कंगुजम हो । लिसिप्रिया भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरकी हुन र उनी पर्यावरणका विषयमा धेरै सक्रिय छिन् । उनलाई २०१९ को बाल शान्ति पुरस्कारले सम्मान गरिएको थियो ।
भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस(८ मार्च) केही यस्ता भारतीय महिलाको नाम लिइरहेको छ, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रमा प्रसिद्ध छन् । यसै क्रममा @mygovindia बाट ट्वीट गरिएको छ, ‘लिसिप्रिया एक पर्यावरण कार्यकर्ता हुन् । सन् २०१९ मा उनलाई डाक्टर एपिजे अब्दुल कलाम चिल्ड्रेन अवार्ड, विश्व बाल शान्ति पुरस्कार र भारत शान्ति पुरस्कारले सम्मानित गरिएको थियो । के तपाई यस्तै कसैलाई चिन्नु हुन्छ ? #SheInspiresUs हैसट्यागमार्फत हामीलाई भन्नुहोस् ।
भारत सरकारको यो ट्वीटको जवाफमा उनले धन्यवाद त भनिन् तर सम्मानलाई अस्वीकार गरिन् । उनी त्यही चुप लागेर बसिनन् एकपछि अर्को ट्वीट गर्दै भनिन् ‘प्रिय नेताहरू राजनीतिक पार्टीहरू, मलाई यसका लागि प्रशंसा चाहिएको छैन । यसको सट्टा आफ्ना सांसदहरूलाई भन्नु होस् चालु संसद अधिवेशनमा मेरा कुरा उठाउन । मलाई आफ्नो राजनीतिक उदेश्य पुरा गर्न र प्रचारका लागि प्रयोग नगर्नु होस् । म तपाईहरूको पक्ष छुइन ।’
लिसिप्रियाले #ClimateCrisis हैसट्यागमा लेखिन् ‘तपाईका सांसद् लाटो मात्र होइन बहिरा र अंधा पनि छन् । यो सुरै असफलता हो । अहिले कारवाही गर्नुहोस् ।’ लिसिप्रियाले प्रधानमन्त्री मोदी र सांसदहरूसंग जलवायु परिवर्तन कानुन बनाउन माग गरिरहेकी छन् ।
लिसिप्रियाको यस्तो कडा जवाफको सामाजिक सञ्जालमा भिन्नाभिन्नै प्रतिक्रिया देख्न पाइउको छ । केही यस्तो ‘बोल्ड’ जवाफका लागि लिसिप्रियालाई प्रशंसा गरिरहेका छन् भने केहीले उनलाई भ्रममा पारिएको बताएका छन् । केहीले यो ट्वीट के उनी आफैले गरेकी हुन ? भनेर प्रश्न खडा गरेका छन् । किनभने जस्तो कुरा त्यसमा लेखिएको छ, त्यो हिसाबले उनको उमेर धेरै कम छ । तर, लिसिप्रियाले प्रष्ट पारेकी छन् उनको ट्वीटर उनका अभिभावकले व्यवस्थापन गर्छन ।
केहीले उनले भारत सरकारको सम्मान लत्याएकामा उनलाई ट्रोल गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा जारी हल्लीखल्लीकैबीच लिसिप्रियाले केही घण्टा अघि ट्वीट गर्दै भनेकी छन् ‘प्रिय दाजुभाई, दिदीबहिनी तथा मैडम मलाई मजाक बनाएर आफ्नो प्रचार गर्न बन्द गर्नुहोस् । म कसैको विपक्षमा छुँइन । म सिष्टममा परिवर्तन चाहन्छु वातावरणमा होइन । म कसैसंग केही आश राख्दिन । म केवल यो चाहन्छु कि हाम्रा नेताले मेरो आवाज सुनुन् ।मलाई विश्वास छ मेरो अस्वीकृतिले मेरो आवाज सुन्न मद्दत गर्नेछ ।’
लिसिप्रियाको तुलना प्रायः स्वीडिस पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनवर्गसंग गरिन्छ । जबकी लिसिप्रियालाई यो तुलना पटक्कै मन पर्दैन । उनी जोड दिएर भन्छिन् ‘मेरो आफ्नै पहिचान छ ।’ लिसिप्रियाले ट्वीटरमा आफूलाई ‘एक घरवारविहीन बाल पर्यावरण कार्यकर्ता’ उल्लेख गरेकी छन् ।
साउदी राजपरिवारका तीन सदस्य पक्राउ
ग्यास हरायो, मजदुर र विद्यार्थीलाई मर्का